Rasaasa News – Jijiga: Dawlada Degaanka Somalida oo xujada Xoolo dhoofinta siisay shirkada Indha-deero
on January 10, 2014 12:33 am
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Dawlada degaanka Somalida Atoobiya ayaa gudoonsiisay xujada xoola dhoofinta taajirka ree Somaliland ee Xaaji Abdi Awad Ali (Indhadeero).
Xujada xoola dhoofinta ee la gudoonsiiyey shirkada Indhadeer, waxaa ogolaanshaheeda ka dambeeya saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka Atoobiya, kuwaas oo la rumaysan yahay in ay amreen madaxda degaanka.
Shirkada Indhadeero waxaa laga leeyahay maamulka Somaliland, shirkadu waxayna caan ku tahay dhoofinta xoolaha nool, soo dajinta badeecooyinka kala duwan iyo waliba iyada oo leh bakhaaro waawayn oo jimladley ah. Shirkada Indhadeero ee la siiyey sharciga dhoofinta xoolaha nool ee degaanka ayaan wax hanti ah iyadu ku lahayn degaanka Somalida Atoobiya.
Ma aha shirkada Indha-deero oo kaliya shirkadaha aan Atoobiya ahayn ee ka qaatay xujadaha degaanka Somalida Atoobiya. Waxaa jira qaar kale oo ka qayb gala tartanka qandaraasyada degaanka iyo ka faa,iidaysiga hantida dadweynaha, kuwaas oo aan faa,iido uga tagin degaanka Somalida.
Waxaa jira shirkado wadani ah oo hore u qaatay xujada dhoofinta xoolo nool, kuwaas oo maal galin badan ku sameeyey degaanka. Shirkadahaas oo haatan u muuqda in xujadii lagala laabtay, sababo aan wali shaacin. Waxaa kale oo jira shirkado wadani ah oo maal galin iyo daraasaad ku sameeyey xoolaha nool sameeyeyna warshada qaliinka xoolaha iyo suuqa ganacsiga ee xoolaha degaanka, kuwaas oo aad moodo in laftigooda haatan laga talaabsaday.
Shirkada Indha-deero, ayaa si toos ah xoolaha nool ugu gudbisa xadka u dhaxeeya degaanka Somalida Atoobiya iyo maamulka Somaliland. Wakiilada shirkada Indha-deero ee xoolaha talaabiya waxay haystaan warqado fasax ah oo heer degaan, waxaana lagu amray Liyuu Booliska in ayna faragalin safarada shirkada.
Waxaa kale oo jira warar hoose oo sheegaya in shirkad dhismo oo laga leeyahay maamulka Somaliland ay dhawaan ka rartay degaanka Somalida Atoobiya qalabka dhismaha Jidadka oo ay leedahay wakaalada Jidadka ee degaanka Somalida.
Wakaalada jidadka ayaa lacag xoog leh ku soo iibsatay qalabka dhismaha jidadka, qalabkaas oo aan ilaa iyo hada qaban hawl ha muuqata.